Izinto Ezinhlanu Okudingeka Uzicabangele Ngaphambi Kokuqalisa Iwebhusayithi Yakho Yezokuhweba Ngomnotho | Martech Zone
Ucabanga ngokwethula iwebhusayithi ye-ecommerce? Nazi izinto ezinhlanu okudingeka uzicabangele ngaphambi kokwethula iwebhusayithi yakho ye-ecommerce:
1. Unelungelo Imikhiqizo
Ukuthola umkhiqizo ofanele ngoba ibhizinisi le-ecommerce kulula ukusho kunokukwenza. Uma ucabanga ukuthi unciphise ingxenye yezethameli, ofuna ukuyithengisela, umbuzo olandelayo wokuthi yini ongayithengisa uyavela. Kunezinto eziningana odinga ukuzihlola lapho unquma ngomkhiqizo. Udinga ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo okhetha ukuwuthengisa uyadingeka. Qonda ukuthi uhlose ukuqhuba ibhizinisi nokwenza imali.
Ukuhlola umkhiqizo omusha noma ukunikela akukhona nje ukuthi kuyasebenza futhi kudla isikhathi, kepha futhi kungabiza kakhulu. Esikhundleni sokuzama okuthile okusha, thola umkhiqizo ofunekayo futhi osendaweni engeyona yokuncintisana. Ukwenza lo msebenzi wesikole kungabonakala njengomsebenzi, kepha kuzokhokha izinzuzo kamuva lapho iwebhusayithi yakho ye-ecommerce ikhula.
2. Iba nabahlinzeki abaningi Nemikhumbi
Lapho usuqede umkhiqizo ozowuthengisa, kuzodingeka ukuthi uthole ukuthi ungawuthola kuphi. Ngaphandle kokuthi wenza umkhiqizo wakho u-100% uwedwa, ngaphandle kwabahlinzeki abathintekayo, khona-ke ungeqa lesi sinyathelo. Kubo bonke abanye abantu, nakhu okumele ukukhumbule.
Ingxenye ebalulekile yefayela le- ukukhiqizwa komhlaba kwenziwa e-Asia. Ukuhlwaya kusuka kula mazwe uye kwenye indawo efana ne-US kuzothatha isikhathi. Ngeke nje kuthathe isikhathi, kodwa futhi kuzoba inkinga njengoba ukude nabahlinzeki bakho ngezinkulungwane zamamayela. Kulezi zimo, kufanele uthole ukuthi abakhiqizi ozoya kubo ngezikhathi zosizi noma ukungaqiniseki.
Okufanelekile, kufanele ube noma yikuphi phakathi kwabakhiqizi abathathu kuya kwabane bomkhiqizo owodwa. Kufanele uxhumane nabo futhi ubazise uma ulindele ukwanda kokuthengisa noma okunye. Uma usuqedile ngokuthola umkhiqizi, kuzodingeka ukhathazeke ngokuthumela umkhiqizo wakho. Kunezinketho eziningi ezitholakalayo, futhi kungcono ukwenza ukukhuthala kwakho okufanele ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuhamba nenye.
3. Lungiselela isiza sakho se-ecommerce ngokuguqulwa
Ake singene ohlangothini lokudala ngokwengeziwe lokuqhuba ibhizinisi le-ecommerce. Ukwenza ibhizinisi lakho liphumelele, kuzodingeka wenze ukuthengisa. Ukwenza ukuthengisa kuncane kakhulu lapho iwebhusayithi yakho yakhelwe ngokungenaphutha futhi isebenza njengoba kuhloswe ngumsebenzisi.
Abaqashi nabaqambi abanesipiliyoni sokwenza amawebhusayithi aqhutshwa yimiphumela uma ungazethembi ukwakha isayithi wedwa. Bangaphakamisa amathuluzi afana nezingxoxo ezingxoxo, uhlelo lokusebenza lokuxoxa bukhoma, noma izigelekeqe ezingasiza ukukhulisa ukuthengisa. Ngokwengeziwe, qiniseka ukuthi iwebhusayithi ayinazo izimbungulu ezibalulekile ezingavimbela abathengi bakho abangaba khona lapho benza ukuthengiselana.
4. Faka Imali Ekumaketheni Okusebenzayo.
Okwamanje, unewebhusayithi yakho ye-ecommerce futhi isebenza, kepha awenzi mali. Ukuqala ukuletha ukugeleza kwemali, uzodinga ukuqala ukutshala imali kuziteshi ezifanele zokumaketha. Kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo. Uma ufuna ukubuyiselwa ngokushesha, ungahamba nezikhangiso zemidiya yokuxhumana nabantu, izikhangiso zenjini yokusesha, ukumaketha okuthonya, ukubala ezimbalwa.
Kubantu abaningi, kufanele uqale ngalezi zindlela ezintathu bese ubona ukuthi yini ekulethela ukuguqulwa. Lapho-ke, lapho uqala ukwenza imali futhi usesimweni sokuzama, ungahle uthande ukubheka amasu wokumaketha wesikhathi eside njengokusebenzisa i-search engine optimization (SEO), ukumaketha kokuqukethwe, ukukhangisa, njll.
5. Sungula Izinqubomgomo Ezicacile Kusenesikhathi
Having izinqubomgomo ezicacile kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwansuku zonke kwewebhusayithi yakho ye-ecommerce kuhamba ngaphandle kwenkinga. Lezi zinqubomgomo zifaka inqubomgomo yobumfihlo yewebhusayithi yakho, inqubomgomo yokubuyisa, ukuthobela i-HIPAA uma ufanelekile, njll.
Kungcono ukuxhumana nomuntu oyingcweti kulezi zindaba. Ngenkathi amathuba okungena enkingeni kufanele abe mancane, waqede ngokuthi ube nezinqubomgomo ezicacile nezikhonkolo ezenzelwe ukukuvikela wena nebhizinisi lakho.
Njengesethenjwa, ungadlula kuzinqubomgomo ezikhona kwamanye ama-giants aholayo e-ecommerce nakwabanye esincintisana nabo abahamba phambili ku-niche yakho.
I-SwiftChat ingakusiza ukukhomba izivakashi ezifanele ngokushesha ngengxoxo ebukhoma futhi uziqondise ekuthengeni. Ingxoxo ebukhoma ku-ecommerce ingaba ngama-400% angabizi kakhulu kunokwesekwa kwefoni, ingakhuphula ukuguqulwa izikhathi ezi-3 kuye kwezi-5, yehlise amazinga okushiya inqola, yenyuse ukwaneliseka kwamakhasimende, yenyuse ukwethembeka kwamakhasimende, futhi ithuthukise umkhiqizo wabasebenzi bakho abasekelayo.
Tags: baxoxeukusebenza kwesilinganiso sokuguqulwakhokhoizinqubomgomo zokugcina idathaingxoxo ye-ecommerceukwethulwa kwe-ecommerceukumaketha kwe-ecommerceabathumeli be-ecommerceabathengisi be-ecommerceQalisawengxoxo bukhomaInqubomgomo yobumfihloukuhlanganiswa komkhiqizoukukhethwa komkhiqizoabahlinzeki bomkhiqizoizinqubomgomo zokubuyisaabathumeli
7 Amathrendi Wokumaketha Abathonya Kulindelwe ngo-2021
UJun 24, 2021 ngo-4: 57 AM
Imakethe yezokuxhumana ecommerce ukumaketha iyithuluzi elinamandla kakhulu. Ikuvumela ukuthi uxhumane nomkhakha wakho, amakhasimende, nemakethe ngendlela yomuntu siqu, yomphakathi. Ungasebenzisa imithombo yezokuxhumana ukukhiqiza ukuzibandakanya nokuxhumana, ukukhulisa ithrafikhi kuwebhusayithi yakho, nokuthuthukisa isisekelo esikhulu samakhasimende. Ukugcina ithoni eqinile nobuntu benkampani yakho ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana kubaluleke kakhulu ngoba ukungaguquguquki yikho okuzodala ukwethembela kuzethameli zakho.